Madaxweyne Xasan oo Muqdisho ku qaabilay wasiir ka socday Britain – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mogadishu, 15 April 2014 – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamud ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay Wasiirka Afrika ee Dowladda UK oo maanta booqasho ku yimid Muqdisho. Madaxweynaha ayaa yiri “UK waxaan uga mahadcelinaynaa ahmiyadda ay siinayaan Somalia.”
Madaxweynaha ayaa yiri “Dowladda UK waxey hormuud ka tahay dadaalka beesha caalamka oo ay ku doonayaan in Somalia ay xasilanto, isla markaana ay ku taageeraan qorsheyaasha dowladda. Dowladda UK waxey labadii sano ee la soo dhaafay qabteen shir caalami ah oo Somalia looga hadlayo oo ujeedadoodu aheyd in caalamka loo soo jeediyo Somalia oo keenay in beesha caalamka ay sidoo kale qabtaan shirar kale sida kii Yokohama iyo Brussels.”
← Gudoomiye cusub oo la wareegay maamulka degmada Xamarweyne → Return of the quirky Somali diasporans